ESRI MapMachine, khariidadaha mawduucyada khuseeya ee internetka - Geofumed
ESRI MapMachine, khariidado mawduucyo ah onlineka
Nofeembar, 2007 ArcGIS-ESRI, Cartografia, Google Earth / Maps
MapMachine waa adeeg ay bixiso ESRI si loo geeyo National Geographicics, halkaas oo aad ka arki kartid khariidadaha khaaska ah ee meelo kala duwan oo adduunka ah.
Khariidadda Venezuela, qaybinta dadweynaha
Aad ufarabeyn, iyo waxqabad. Waxaa ka mid ah fursadaha la soo bandhigi karo:
halista iyo nugulaanta
sawirada dayax gacmeedka
Beddel aad u fiican ... iyo sahlan.
Post Previous«Previous Atlas ee khariidadaha waxbarashada ... lacag la'aan
Post Next Mashruucyada GIS, ee ka faa'iideysanaya?Next »
6 Jawaab "ESRI MapMachine, khariidadaha mowduucyada ee internetka"
ismoil isagu wuxuu leeyahay:
Assalomu hakula jirto, nin Fani o'qituvchisiman geografiya, manashu ArsGIS Dasturi programmasini qanday skachat qilsam bo'ladi, pullik bo'lsaxam yaxshi bo'lardi.
Haddii ay jirto, fiiri Tuent si aad u aragto haddii ay ka soo baxayso filashada aad filayso.
Henry Herrera isagu wuxuu leeyahay:
Galbaal wanaagsan, haddii aan haysto macluumaadka geo-ku-xigeenka ee faahfaahin dheeraad ah, sida. maadaama ay ka soo jeedaan dalka Mexico, waxaanan doonayaa in aan sameeyo khariidad mawduucyo, ma jiraa kheyraad internet oo ammaan ah oo wax ku ool ah kaas oo ii ogolaanaya inaan gudbiyo xogta oo aan helo khariidadda mawduuca ah?
emerald isagu wuxuu leeyahay:
Venesuela waa aabbe wanaagsan iyo waxa ugu fiican .. Waxaan rabay macluumaad dheeri ah laakiin ma helin .Taas ka sokow, khariiddada ayaa aad ufiican, laakiin waxaan u baahanahay khariidadda muuqaalka ee Venezuela, laakiin si kasta oo ay tahay, waad booqataa Venezuela waxaadna arki doontaa in aabbahay aad ii jeclaaday, Hagaag, is ogow naftaada.
Aniga waxaan ahay sarahi si fiican ayaan uga taxadarayaa markaan ku arko.
boqor isagu wuxuu leeyahay:
Venzuela waa kan ugu fiican
aad u fiican bogga laakiin sida aan u helo khariidooyinka mawduuca ee venezuela